INetflix vs Hulu (2020) - Impi Yokuqhathanisa - Ezokuzijabulisa
Isikhathi sezinhlelo zokusebenza zokusakaza manje sifinyelela isiqongo. Cishe yonke inkampani itshala imali kuhlelo lokusebenza lokusakaza. Unokusakaza bukhoma kwe-TV, okuqukethwe koqobo, umculo, umsakazo, ngisho nezinhlelo zokusebenza zokudla zitshala imali ezinsizeni zokusakaza. Kodwa-ke, kulo mjaho, awukwazi ukungazinaki lezi ziqhwaga ezimbili.
INetflix vs Hulu ibe yingxoxo ende. Abantu abaningi badideka phakathi kokunquma ukuthi yiluphi uhlelo lokusebenza olungcono kubo. Ngakho-ke, lapha uzothola isibuyekezo esigcwele esinciphisa ukujaha futhi sikulethele imininingwane eqondile.
Akusekho ukulinganiswa kokunwetshwa, utshalomali, izindleko, nezinye izici. Imayelana nokusebenziseka kalula komsebenzisi nezikhathi zokuzijabulisa ezilethwa uhlelo lokusebenza. Yilokho okwenza uhlelo lokusebenza luphumelele ngempela. Okuqukethwe nokuzijabulisa yilokho okubaluleke kakhulu. Ngakho-ke ake siqale le mpi yemidondoshiya yokusakaza!
I-Netflix vs Hulu - Ukuqhathanisa okuhle kakhulu
IHulu itholakala kuphela e-USA. Ngakho-ke, kuzofanele usebenzise i-VPN uma ufuna ukufinyelela iHulu evela kwamanye amazwe nezifunda. Kodwa-ke, iNetflix iyaqhubeka ikhula futhi itholakala emazweni amaningi.
INetflix ikulethela okuqukethwe koqobo, kanye nokuqukethwe kwasendaweni. Kodwa-ke, kusho nokuthi ukutholakala kokuqukethwe ku-Netflix kuncike esifundeni. Ngenxa yamalungelo welayisense nezinye izidingo, okunye okuqukethwe kungahle kungatholakali esifundeni sakho.
Kodwa-ke, uma ubheka ngale kwalokho, ngokuya ngokutholakala kwesifunda nokutholakala, iNetflix idlula iHulu. Kodwa-ke, uma ungathola izandla zakho ngokuthembekile I-VPN service, lapho-ke ungangena ku-Hulu ukusuka noma yikuphi ngaphandle kwenkinga.
I-Netflix vs Hulu - Ukuhambisana Kwedivayisi
Kokubili iNetflix neHulu zisekela inqwaba yamadivayisi. Basekela i-iOS, i-Android, iWindows namanye amapulatifomu. Ngakho-ke, ungafinyelela kuzo kuma-Smartphones, ama-Tablets, ama-Smart TV, ama-laptops, namakhompyutha wakho. IHulu neNetflix ziyatholakala nakuma-consoles adumile emidlalo. Kodwa-ke, kulapho iHulu idlula kancane iNetflix.
IHulu iyatholakala kupulatifomu yeNintendo, ikakhulukazi Shintsha. INintendo Shintsha ithole ukuthandwa okuphawulekayo, ikakhulukazi e-USA. Ngakho-ke lokhu kutholakala kulula kubasebenzisi.
I-Netflix vs Hulu - Impi Yokuqukethwe
Uma ukhuluma ngokuqukethwe, i-Netflix yaziwa ngokunikela ngokuqukethwe kwasekuqaleni. Ngaso sonke isikhathi sikhulisa isabelomali sayo sokutshala imali kokuqukethwe kwasekuqaleni esikunikezayo. Ngo-2020, iNetflix yabeka imali engaphezu kwama- $ 17 Billion ukunikela ngokuqukethwe kwe-premium nokuqala kubasebenzisi.
Bangu imibukiso namabhayisikobho amaningi athandwayo itholakala kuphela kwi-Netflix ongeke uyithole kwenye indawo. INetflix ikwazile ukudala i-niche yayo. Ihlanganisa amanye ama-movie aziwayo nezinhlelo ze-TV, futhi. Kodwa-ke, izimpi zeNetflix zokuthola amalungelo iningi lemidlalo ye-TV nama-movie.
Muva nje, iNetflix isebenza ukuhlinzeka ngokuqukethwe okuhehayo kwe-Anime ukuthola umncintiswano wokuncintisana ngezinye izinhlelo zokusebenza zokusakaza. Ngokuqinisekile idlala ngokuvumelana nayo. Kodwa-ke, i-anime yasekuqaleni yeNetflix ayithandwa kakhulu njenge-anime yangempela evela eJapan.
Ngakolunye uhlangothi, iHulu ikulethela okuqukethwe okuningi okutholakala kakhulu eziteshini ze-TV. Inamalungelo avela ku-NBC, ABC, Fox, HBO, nakwezinye iziteshi ze-TV ezivelele zokunikeza okuqukethwe. Ngakho-ke, ungapheqa futhi sakaza imibukiso yakho ye-TV oyithandayo nama-movie ngaphandle kwemingcele. IHulu iyanikela ngochungechunge lwayo lochungechunge lwangempela, kepha aluphumelelanga njengokunye okuqukethwe okudumile.
I-Netflix vs Hulu - I-TV ebukhoma nezengezo
INetflix ayinikeli nganoma iyiphi iphakheji yokwengeza noma i-Live TV. Yilapho uHulu ehamba phambili ngokumangazayo. Ngenkathi iNetflix izuze ukubusa kwayo ngokuqukethwe okuhle kwasekuqaleni, iHulu ibusa ngokuletha lula kubasebenzisi.
Ungangena eziteshini ze-Live TV, kanti iHulu ineqoqo elikhulu lalezi ziteshi. Ukubhaliselwa kwayo kukuvumela ukuthi ulande (esikhundleni sokurekhoda) okuqukethwe okuvela eziteshini ze-TV naku amanye ama-movie . Ngokwengeziwe, kunezengezo eziningi ongazengeza njenge-Starz, i-HBO nezinye iziteshi.
Ngokufaka lokhu okubhaliselwe, uzokonga ngokuphawulekayo, futhi asikho isidingo sokuthi ulande lezi zinhlelo zokusebenza ngokwehlukana. UHulu ubesebenzisana nabanikezeli bezinsizakalo eziningi zokusakaza njenge I-Disney , I-ESPN, nabanye ukukulethela izinhlelo zokubhalisa ezinokwenzeka njengezengezo ne-Live TV.
Le nketho evela kuHulu ngokuqinisekile iyibeka amaligi ngaphezu kweNetflix, ngokuya ngomjaho wokuqukethwe. Kodwa-ke, namanje ayikwazi ukufana nekhwalithi yokuqukethwe iNetflix eyaziwayo. Ungasho nokuthi ngokuqukethwe, iNetflix manje iyisiteshi esizimele sodwa.
I-Netflix vs Hulu - Ikhwalithi Yokuqukethwe
Kokubili iNetflix neHulu kungasekela okuqukethwe kwe-HD. Bobabili banikela ngencazelo ejwayelekile yezinhlelo eziyisisekelo ongazenza ngokuthola izinhlelo ezingcono. Kodwa-ke, iHulu inobubanzi obuncane bokuqukethwe nama-movie atholakala ku-4K Ultra HD.
Okwamanje, iNetflix inikela ngokuqukethwe kwe-4K Ultra HD ngalolu hlelo lwePrimiyamu ongalusebenzisa kunoma iyiphi idivayisi. Okubaluleke kakhulu, konke okuqukethwe kwayo kutholakala ku-4K HD. Ngakho-ke uma ungumuntu othanda ikhwalithi emnandi, kungenzeka ukuthi iNetflix iwunqobile lo mjikelezo.
I-Netflix vs Hulu - Izinhlelo Zokulingwa Nezivivinyo
Uhlelo lokuqala nolushibhile lukaHulu lunezikhangiso. Ayikho indlela yokuba weqe, futhi lezi zikhangiso zinganciphisa umuzwa wakho wokubuka. Yilapho iNetflix idlula khona ngoba ayinikezi nhlobo uhlobo lwesikhangiso.
Kokubili iHulu neNetflix kungakunikeza ukuthi usakaze kumadivayisi amabili anezinhlelo ezifanele. Kodwa-ke, uma ucabanga ngamanani entengo, iHulu ibiza kakhulu kuneNetflix.
Kodwa-ke, ngokuhamba kwesikhathi, ngenqwaba yeziteshi, kungaba yindlela yokubeka imali engabizi kakhulu njengoba inciphisa imfuneko yokuba nezinhlelo zokusebenza eziningi kakhulu efonini yakho. Futhi awunakuba nokubhaliselwe okuningi kakhulu ongalandelela.
INetflix ayinikezeli ngesilingo samahhala noma okubhaliselwe kubathengi bayo. Okwamanje, UHulu unesivivinyo samahhala sezinyanga ezingama-30 ngezinhlelo ezimbili zokuqala. Kwi-Hulu + Live TV, uthola isivivinyo sezinsuku eziyisikhombisa. Ngakho-ke, unganquma ukuthi uyafuna yini ukubhalisela i-Hulu ngokuzayo noma cha. Lokhu kubeka uHulu phambili kweNetflix.
INetflix vs Hulu - Isinqumo Sokugcina
I-Netflix iwina ngemibala endizayo uma ucabanga ngobuhle bokuvela kokuqukethwe nokutholakala ezifundeni eziningi nasemazweni ane-4K HD nokuhambisana kwendawo yonke. Futhi kushibhile kakhulu kunokubhaliselwe kweHulu. Noma kungekho isilingo esitholakalayo, i-Netflix ithole ukuqashelwa ngokunikeza okuqukethwe okuhle. Ngakho-ke, abantu basemathubeni amaningi okubhalisela, futhi uhlelo oluyisisekelo lungabizi kakhulu.
Kodwa-ke, uma uthanda i-Live TV noma ufuna ukubhalisela ezinye izinhlelo zokusebenza zokusakaza, kepha ebangeni elinokwenzeka, uHulu angahle abonakale ephumelela. Ngaphandle kwalokho, awukwazi ukubheka emuva kweqiniso lokuthi iHulu itholakala kuphela e-USA. Ibuye inikeze izikhangiso zohlelo oluyisisekelo. IHulu kuzofanele ilinganisele kakhulu umdlalo wayo ngoba konke ekuzenzela kona ukwengezwa kwesici ne-TV ebukhoma kakhulu.
Kunezinye eziningi izinhlelo zokusebenza zokusakaza kanye nabahlinzeki bezinsizakalo ezinikezela nge-Live TV ebangeni elingenzeka. I-Youtube TV ingesinye sezibonelo ezivelele. Ngakho-ke, ngokuhamba kwesikhathi, futhi uma ungakhathazeki ukufaka izinhlelo zokusebenza ezimbili noma ngaphezulu kudivayisi yakho, iNetflix ingumnqobi ocacile.
Ingabe Bazoba Khona Abalindi Isizini 2?
Ingabe Uyakulangazelela Ukwazi Ukubuyekezwa Kwe-Green Knight?